सुरक्षाकर्मीमाथि ‘कोरोना अट्याक’ : २ हजार ५ सय भन्दा बढी संक्रमित, कसरी फैलियो संक्रमण ? | Kendrabindu Nepal Online News
31825033 976157 7420752 23428124
सुरक्षाकर्मीमाथि ‘कोरोना अट्याक’ : २ हजार ५ सय भन्दा बढी संक्रमित, कसरी फैलियो संक्रमण ?
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १७:४४
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सोमबार मात्रै ८९९ जना जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सबैभन्दा बढी अर्थात् ५ हजार ७२४ जना संक्रमित भेटिएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४६० जना पुगेको छ भने यसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २२८ जना पुगेको छ । कुल संक्रमितमध्ये २१ हजार ४१० जना निको भएका छन् ।
यसरी फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षा निकायमा पनि ‘कोरोना अट्याक’ बढ्दो छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिएका सेना, प्रहरी र सशस्त्रका गरी २ हजार ५ सय ८२ जना भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कुन निकायमा कति संक्रमित ?
कोरोना संक्रमणको मुख्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाको २ वटा ब्यारेकमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । नेपाली सेनाको लमजुङमा रहेको कृषि तथा पशुपालन व्यावसायिक स्वावलम्वन तालिम केन्द्रभित्र कोरोना संक्रमण फैलिएको छ ।
त्यसै गरी बाँकेको कौशिलानगरमा रहेको मध्यपश्चिम पृतना तालिम केन्द्रमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएर ५१ जना सैनिक संक्रमित भएका छन् । सो तालिम केन्द्रमा सहभागीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि अहिले तालिम स्थगित गरिएको छ । प्युठानबाट तालिममा सहभागी हुन आएका एक सैन्यबाट उक्त कोरोना संक्तमण फैलिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
अहिले दुवै ब्यारेकमा आइसोलेसन बनाएर उनीहरुको निगरानी नेपाली सेनाका चिकित्सकहरुले गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म नेपाली सेनाका ४ सय ३८ जना संक्रमित भएका छन् ।
संक्रतिममध्ये १ सय २१ जना निको भएर ब्यारेक फर्किएका छन् भने ३ सय १७ जनाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर चिकित्सकको निगरानीमा उपचारत रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीमा देशभर एक हजार ६ सय २९ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । संक्रमित हुनेमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकदेखि जवान समेत रहेका छन् । संक्रमितमध्ये ६ सय ९३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएर काममा फर्किएको र ९ सय ३६ जना भने बिभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा उपचारका क्रममा रहेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कठायतले जानकारी दिए।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत थप १३ जना प्रहरीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । थप संख्या सँगै रानीपोखरीमा कार्यरत कुल संक्रमित प्रहरीको संख्या २८ पुगेको छ । कपाल काट्ने प्रहरी कर्मचारीबाट रानीपोखरीमा कोरोना फैलिएको थियो । संक्रमित प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, आयुर्वेदिक अस्पताल कीर्तिपुर र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ अस्पतालको आइसोलेशनमा भर्ना गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार सुरक्षाको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गुल्मका २६ जना प्रहरीमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा संक्रमित प्रहरीको संख्या ५६ पुगेको छ । यता प्रहरी हेटक्वाटर नक्सालमा मात्रै अहिलेसम्म ९३ जनामा कोरोना देखिएको ।
अहिलेसम्म अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिने सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीमा देशभर नै संक्रमण देखिन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३२२ जना प्रहरीमा कोरोना देखिएको छ । जसमध्ये १ सय भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी रहेका छन् । प्रहरी हेडक्वाटरमा मात्रै ९३ जनामा कोरोना लागेको छ । यसरी प्रदेश नम्बर १ मा अहिलेसम्म २०८ जना प्रहरीलाई कोरोना लागेको छ। प्रदेश २ मा १२०,बागमती प्रदेशमा ४३, गण्डकीमा ६०,कर्णालीमा १५ र सुदुरपश्चिममा १८ जनामा कोरोना लागेको छ ।
यता, सशस्त्र प्रहरी बलका ५ सय १५ जना संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये २ सय १७ जना संक्रमणमुक्त भएर पूर्ववत् काममा फर्किएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए । दुई सय ९८ जनाको भने विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
कसरी भयो सुरक्षाकर्मीमा कोरोना ?
कुनै पनि विपत्ति, बाढीपहिरो, झगडा जुलुसदेखि सडक सुरक्षा तथा ठूला महामारीमा समेत सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने निकायहरु हुन् नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना । यतिबेला यी तिनै निकाय दिनरात सडकदेखि सिमानासम्ममा कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कठायतले नेपाल प्रहरी सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गरिरहेकाले संक्रमित भएको बताए । आन्दोलनमा, जुलुस तथा निषेधाज्ञा क्षेत्रमा प्रवेश रोक्न जादा, विभिन्न अभियोग लागेकालाई समाउदा, ट्राफिक प्रहरी सवारी साधन चेक गर्दा तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा प्रहरीलाई कोरोना संत्रमण बढेको उनले बताए ।
कोरोनाबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भएपनि प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेक्रममा सधैं सबैको सम्पर्कमा जानुपर्ने हुनाले बढी जोखिम भएको उनको भनाइ छ । यसको रोकथामको लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर संक्रमितलाई उपचार गर्ने र धेरैलाई संक्रमण भई ठाउँ खाली भएमा प्रहरी थप गरि काम गरिरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, सीमा सुरक्षा, विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर तथा शव व्यवस्थापनको कामबाट सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढेको कठायतले बताए ।
त्यस्तै, सेनामा सबैभन्दा पहिला कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्दा कोरोना देखिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताए ।
त्यसपछि विभिन्न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा भारतीय सिमामा खटिएकाहरुमा कोरोना देखिएको थियो । अहिले सेनाले कोरोना संत्रमितलाई आफ्नै क्वारेन्टाइन तथा विभिन्न अस्पतालमा राखेर उपचार गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
यसरी अहिले भिआईपिको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमित बढेका छन । यस अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवंम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षार्थ खटिएका ६ जना सुरक्षाकर्मी तथा भान्सेमा समेत कोरोना संक्रमण भएको थियो । त्यस्तै,नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षार्थ खटिएका ९ जना सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोना देखिएको थियो ।
त्यस्तै, नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलको सुरक्षार्थमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोना देखिएको थियो । यश अगाडि सभामुख अग्नीप्रसाद सावकोटाको सुरक्षार्थमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोना देखा परेको थियो ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको सुरक्षामा खटिएका एकजना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खतिवडासहित दुईजना न्यायाधीश सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका थिए।
कोरोना नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि नै कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेपछि कोरोनासँगको युद्धमा थप चुनौति थपिएको छ ।
apf police, covid19, Nepal Army, nepal police
Prevनिषेधाज्ञाको अवधिमा करिब बाह्र हजार सवारी कारवाहीमा
घाँटीबगरको पहाड फोड्दै नेपाली सेना, भदौभित्रै बाटो निर्माण सकिनेNext